Soo iibso Instagram Likes Kusoo dhawoow bogga Instagram
Waa maxay faa'iidooyinka aan arki doono haddii aan iibsado Instagram Likes?
Maxay tahay inaan iibsado Instagram Likes?
Likes waa suurta galnimada midda ugu muhiimsan ee qofka raacsan ama qofka raacayaa uu eegi doono markay eegayaan astaantaada. Aad ayey muhiim u tahay in Jeceshaadu inay isbarbar dhigto raaciyahaaga si loo ilaaliyo aaminaadda dhagaystayaashaada. Haddii aad xisaabta ku leedahay 20,000 Raacag ah iyo 20 Jeclaan oo keliya, waxay u horseedi doontaa dhagaystayaashaada inay su’aal ka keenaan sharcinimada iyo hawlgalka kuwa raacsan. Markaad iibsanayso Bogga 'Likes' Instagram, waxaad kordhin kartaa Likes to Followers saamiga aad ku leedahay astaantaada. Tan waxaa loo muujiyay in ay kordhineyso howlgalka dabiiciga ah ee dhagaystayaashaada.
Goorma ayaa la ii siin doonaa Instagram jeclo?
Si loo hubiyo adeegga iyo tayada gaarsiinta ugu sarreysa, waxaan gacanta ku eegnaa iib kasta. Sidaa darteed, waxay qaadan kartaa ilaa 24 saacadood inta amarkaagu bilaabmayo. 99% wakhtiga dalabkaagu wuxuu bilaabanayaa saacado yar gudahood ama wax ka yar. Haddii aad leedahay amar ballaadhan way sii socon doontaa maalin kasta ilaa adeegga si dhammaystiran loo dhiibo. Haddii aad xiisaynayso in Likes loo wada diro dhammaan qoraaladaada si toos ah, waxaad ubaahnaan kartaa inaad tixgeliso qorshayaashayada sida tooska ah u jecel. Si aad u daawato qorshayaashaan, gal halkan.
Adeegyadayadu waa 100% aamin ah oo la isticmaali karo. Si ka duwan adeeg bixiyayaal badan kama codsanno ama uma baahnno furahaaga sirta ah ee Lambarkaaga Bulshada. Sidaa daraadeed, kuma xakameyneyno koontadaada ama uma jeedinno wax kasta oo aysan ahayn inay qabato. Adeegyada aan bixinno waa kuwo la tijaabiyey waqtiyo aan tiro lahayn oo aan sii wadno cusbooneysiinta iyo isbeddelada codsiyada warbaahinta bulshada si loo hubiyo tayada ugu sarreysa iyo natiijooyinka ugu wanaagsan. FreeFollowers.io waxay ku bixineysay adeeggeeda ugu tayo sarreeya uguna halista badan adeegyada Suuqgeynta Bulsho ee Warbaahinta.